राजनीतिमा आउने पूर्वकप्तान खड्काको तयारी ! — Imandarmedia.com
राजनीतिमा आउने पूर्वकप्तान खड्काको तयारी !
काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान पारस खड्काले अब राजनीतिमा आउने बताएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सक्रिय खेल जीवनपछिको योजनाबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले राम्रो मौका पाए राजनीतिमा आउने बताए। तर, उनले कुन दलबाट राजनीति गर्ने भन्ने विषयमा भने केही खुलाएनन्।
उनले सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभन्दा पहिला क्रिकेट व्यवस्थापन लाग्ने योजना रहेकोसमेत बताएका छन्। खड्काले मंगलबार क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका थिए।क्रिकेट संघमा जाने आफ्नो योजना रहेको भन्दै उनले त्यो सजिलो भने नरहेको बताए। तर पनि आफू क्रिकेटमा योगदान दिन लागिपर्ने उनले बताए। उनले क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गर्नेसमेत योजना सुनाए।
काठमाडाैं । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका क्रिकेटर पारस खड्काले सही अवसर प्राप्त भएमा आफू राजनीतिमा पनि लाग्न सक्ने बताएका छन् । तर तत्काल भने नेपाली क्रिकेटलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रीत हुने उनको भनाइ छ ।
राजनीतिमा लाग्ने कुरा बताए पनि उनले कुन पार्टीतिर झुकाव भन्ने बारे चाहिँ खुलाउन चाहेनन् । उनले अहिले उचित समय लागेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट राजीनामा दिएको पनि बताए । ‘यो राइट टाइम भनेर अनाउन्समेन्ट गरेको हो’, उनले भने । नेपाली क्रिकेट टिमभित्रको वातावरणलाई आफूले सधैँ मिस गर्ने खड्काले बताए ।
उनले आगामी दिनमा क्रिकेटलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर क्यानसहितका अधिकारीलाई आइडिया दिनसक्ने भन्दै आगामी दिनमा मौका मिलेमा क्यानमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पनि बताए । छिट्टै क्रिकेट एकेडेमी लन्च गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले त्यसलाई नेपालभर लिएर जाने पनि बताए ।
सन् २००४ मा मलेसियाविरुद्ध खेल्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका पारस सन् २००८ देखि २०१९ सम्म राष्ट्रिय टिमका कप्तान समेत रहे । नेपालका लागि करिब १७ वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेका उनले सफल अलराउन्डरको रुपमा आफूलाई स्थापित गरे । एसोसिएट क्रिकेटकै स्टारका रुपमा रहेका पारसले पछिल्लो समय विदेशी फ्रेन्चाइज लिगमा पनि खेलेका थिए ।
पारस नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफलक कप्तान हुन् । उनको कप्तानीमा नेपालले पहिलो पटक २०१४ टि२० विश्वकप खेलेको थियो । सन् २०१८ मा नेपालले पहिलो पटक ऐतिहासिक ओडिआई मान्यता पाएको थियो । पारसको कप्तानीमा नेपालले २०१० मा पहिलो पटक डिभिजन पाँचको उपाधि जितेको थियो ।
उनको कप्तानीमा नेपालले डिभिजन ५ देखि ३ सम्म उपाधि जितेको छ । पारस ओडिआई र टि२० आई दुवैमा नेपालबाट पहिलो शतक प्रहार गर्ने खेलाडी हुन् । ओडिआईमा सन् २०१९ मा यूएई र त्यसैवर्ष सिंगापुरविरुद्ध टि२० आईमा शतक प्रहार गरेका थिए ।
टि२० आईमा लक्ष्य पछ्याउँदा शतक प्रहार गर्ने उनी पहिलो कप्तान हुन् । पारसले नेपालबाट १० ओडिआई, ३३ टि२० आई, २ प्रथम श्रेणी, ४४ लिष्ट ए र ५६ टि२० क्रिकेट खेलेका छन् ।